न्युजर्सी राज्यको एशियन अमेरिकन र प्यासेफिक आइल्याण्डर आयोगमा डा. विष्णुमाया परियार « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यका गभर्नर फिल मर्फीदले एशियन अमेरिकन र प्यासिफिक आईल्याण्डर एएपिआई आयोगमा सामाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियारलाई मनोनित गरेका छन् । उनीसहित २८ जनालाई उक्त आयोगमा मनोनित गरिएकोछ। यसरी कमिश्नर नियुक्त हुने डा. परियार एक मात्र नेपाली हुन्।
गभर्नर मर्फीले गत वर्ष सन् २०२१ को नोभेम्बरमा यो आयोगको स्थापना गरेका थिए । मे महिनालाई एशियन अमेरिकन र प्यासिफिक आईल्याण्डर सम्पदा महिनाको रुपमा मनाइरहँदा यो नियुक्ति गरेका हुन्।
गभर्नर मर्फीले एशियन अमेरिकन र प्यासिफिक आईल्याण्डरहरूको जनसंख्या न्युजर्सी राज्यमा अमेरिकाभरमा तेश्रो ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै राज्यको विविधतामा एएपिआई समुदायको मुख्य भूमिका रहेको बताएकाछन्। उक्त एएपिआई आयोगले राज्यमा एएपिआई समुदायको सामाजिक र आर्थिक हक हीतको निम्ति नीति निर्माण गर्ने र गभर्नर र राज्य सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ।
डाक्टर परियार जर्सी सिटी सहरको मेयर स्टिभन फुलपको विविधता र समावेशी बोर्डकी पूर्व सल्लाहकार हुन् भने हाल महिला सल्लाहकार हुन् । उनी रोजगारी र तालिम कमिटीको सदस्य समेत रहेकीछिन्। जर्सी सिटी सहरको महिला आयोगको गठन गत जनवरी २६ मा काउन्सिल प्रेसिडेंट जोयस वाटरम्यानको नेतृत्व र डा परियारको पहलमा गठन भएको हो।